Voina teny Ankatso II :: Hotohoton’ny afo ny tranon’ ny mpianatra • AoRaha
Lasibatry ny afo ny trano fonenan’ny mpianatra eny Ankatso II ao amin’ny Bloc Amical II, tamin’ny alin’ny sabotsy, tokony ho tamin’ny 11 ora sasany teo, araka ny vaovao voarain’ny avy ao amin’ny mini- siteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tsy fantatra mazava izay niandohan’ny afo. Nilaza ireo nanatri-maso fa mety ho ny fiakaran’ny herinaratra tampoka no nahatonga rianaratra na “court-circuit” nitarika tamin’izao fahamaizana izao. Fitopolo ny isan’ireo mpianatra tsy manankialofana sy rava fananana.
Tonga teny an-toerana ny sampana mpamonjy voina sy ny mpitandro filaminana, nefa mbola nanahirana ny famonoana afo noho ny tsy fahampian’ny tosiky ny rano sy ny fahasarotan’ny fahitana rano. Voatery nandeha naka rano teny Ambohipo ireo mpamono afo. Naharitra adiny telo teo ho eo vao voafehy tanteraka ny loza. Tsy nisy kosa ny naratra na ny aina nafoy.
Tonga nankahery an’ireo mpianatra teny an-toerana ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Assoumacou Elia Béatrice sy ny sekretera jeneralin’ny Mesupres ary ireo solontena avy ao amin’ny kabinetra. Nisy ny toerana namindrana vonjimaika an’ireo mpianatra tra-boina. Milaza ny hitady vahaolana ho an’ireo mpianatra very fitaovana sy raki-pahalalana ny minisitera, ankoatra ny vonjy voina natao tamin’ny alalan’ny fanomezana entana ilaina andavanandro, omaly, toy ny vary, voamaina, siramamy, sira, menaka, kojakojam-pidiovana ary fiarovana amin’ny valanaretina.
Famokarana fanafody :: Hisokatra, amin’ity herinandro ity, ny Pharmalagasy